July 12, 2021 - Khitalin Media
သွေးအားနည်းသူတွေ၊ သွေးပေါင်ကျသူတွေ အတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝဆေးနည်း…..
July 12, 2021 by Khitalin Media
ကြက်ဥ၊ သံပုရာသီးအမှည့်၊ သကြား ဒီသုံးမျိုးကိုမယုံရင် လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ ရုတ်တရက် အားအင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်နေပြီး၊ မူးဝေသလို၊ အိပ်ရေမဝသလိုဖြစ်နေရင် ဒီနည်းလေး စမ်းသုံးကြည့်ပါ။ အားအင်ကုန်ခမ်းမောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် မူးဝေခြင်းကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေသည့် ကြက်ဥသံပုရာဆမ်းဆေးတစ်ခွက်”အလုပ်ပင်ပန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်၊အားအင်ကုန်ခမ်းလို့ ဖြစ်ဖြစ်၊မူးဝေနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူ သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ဆေးနည်းတစ်လက် ကိုမျှဝေပေးပါ့မယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ (1) ကြက်ဥအစိမ်းတစ်လုံး၊ (2) သုံပုရာသီးအမှည့်တစ်လုံး၊ (3) သကြားဖြူဟင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်းတို့ကိုဖေါက် ထည့်ရောမွှေပေးပါ။ သံပုရာအစေ့တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်ရောမွှေ ပြီးသောက်ပေးရင်အမောအပန်းပြေပြီးအားရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းကကျွန်တော့်ဖခင်ပေးတဲ့ရိုးရာဆေး တစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းသူတွေနဲ့ သွေးပေါင်ကျသူတွေပိုပြီးသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်သူတွေအတွက်လည်းအားဆေးတစ်လက်ပါ။။ crd Unicode ကွကျဥ၊ သံပုရာသီးအမှညျ့၊ သကွား ဒီသုံးမြိုးကိုမယုံရငျ လကျတှစေ့မျးကွညျ့လိုကျပါ။ ရုတျတရကျ အားအငျကုနျခမျးသလိုဖွဈနပွေီး၊ မူးဝသေလို၊ အိပျရမေဝသလိုဖွဈနရေငျ ဒီနညျးလေး စမျးသုံးကွညျ့ပါ။ အားအငျကုနျခမျးမောပနျးနှမျးနယျခွငျးနှငျ့ မူးဝခွေငျးကိုသကျသာပြောကျကငျးစသေညျ့ ကွကျဥသံပုရာဆမျးဆေးတဈခှကျ”အလုပျပငျပနျးလို့ဖွဈဖွဈ၊အားအငျကုနျခမျးလို့ ဖွဈဖွဈ၊မူးဝနေရေငျပဲဖွဈဖွဈအလှယျတကူ သကျသာပြောကျကငျးစတေဲ့ဆေးနညျးတဈလကျ ကိုမြှဝပေေးပါ့မယျ။ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေတော့ (1) ကွကျဥအစိမျးတဈလုံး၊ … Read more
ခေါင်းအုံးအောက်မှာကြက်သွန်ဖြူထားပြီးအိပ်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာမယ့်ကောင်းကျိုး ၄ ခု……
ခေါင်းအုံးအောက်မှာကြက်သွန်ဖြူထားပြီးအိပ်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာမယ့်ကောင်းကျိုး ၄ ခု နှာခေါင်းပိတ်တာပျောက်စေတယ် တစ်ခါတစ်လေကျရင် နှာစေးလို့၊ အအေးမိလို့ နှာခေါင်းပိတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ညဘက်ရောက်မှ နှာခေါင်းတစ်ဖက်ပိတ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ညအိပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာ ကြက်သွန်ဖြူကို ခေါင်းအုံးအောက်ထားပြီး အိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုနှာခေါင်းပိတ်တာ သက်သာပြီး ပျောက်သွားစေပါတယ်။ အသက်ရှူလို့ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ပိုကောင်းလာစေတယ် ကြက်သွန်ဖြူက မကောင်းတဲ့ဘတ်တီးရီးယားတွေကို ချေဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ညအိပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာ ကြက်သွန်ဖြူကို ခေါင်းအုံးအောက်ထားပြီး အိပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခံအားစနစ်ပါ ပိုပြီးကောင်းလာစေပါတယ်။ မနက်နိုးတဲ့အခါမှာလည်း နေလို့ကောင်းတဲ့ feeling မျိုးရစေပါတယ်။ ပိုးကောင်တွေမလာအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် ကြက်သွန်ဖြူကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာထားတာက ပိုးကောင်တွေ၊ ပင့်ကူတွေ၊ ခြင်တွေမလာအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ တချို့ကတော့ ကြက်သွန်ဖြူကနံတယ်ဆိုပြီး အဲ့လိုထားတာမကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပိုးကောင်တွေရှိတတ်ရင်တော့ ထားသင့်ပါတယ်။ ပိုပြီးအိပ်လို့ကောင်းလာစေတယ် ကြက်သွန်ဖြူက vitamin B1 ကြွယ်ဝတဲ့အတွက် အိပ်မပျော်ခြင်းကို တိုက်ထုတ်ပေးပြီး ကောင်းမွန်စွာနဲ့ … Read more
ကိုယျ့သားသမီးကို ရိုငျးစခေငျြတဲ့ မိဘ ရယျလို့ ဘယျရှိပါ့မလဲ?ကိုယျကမိဘ အုပျထိနျးသူတဈယောကျဆိုရငျ ကိုယျ့သားသမီးကို ယဉျကြေး လိမ်မာ စခေငျြကွမှာ ဓမ်မတာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ လောက မှာ ဖွဈခငျြတဲ့အရာတိုငျးက လှယျလှယျကူကူလေးဖွဈလာတာမဟုတျတဲ့အတှကျ မဖွဈလာတဲ့အခါလညျး စိတျအရမျးပူမသှားပဲ ကိုယျ့ဘကျက ဘယျလို လေးတှမြေား ထိနျးကြောငျးသငျပွ ပေးမယျဆိုရငျ အဆငျပွနေိုငျမလဲဆိုတာ ကို ထပျပွီးကွိုးစားကွညျ့ဖို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။ 1. ပြျောတတျအောငျသငျပေးပါ ဒီအရှယျဟာ ပြျောစရာတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနတေဲ့အခြိနျကောငျးပါ။ ဒီလိုအခြိနျမှာမှ လောကကွီးရဲ့အနှဈသာရကိုအပွညျ့အ၀မခံစားရငျ သိပျနှမွောဖို့ကောငျးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီအရှယျမှာ သူတို့ရဲ့ပြျောရှငျမှုတှကေိုမပိတျပငျပဲ အတိုငျးတာတဈခုထိလှတျထားပေးသငျ့ပါတယျ။ 2. အကောငျးမွငျတတျအောငျသငျပေးပါ အကောငျးမွငျတတျတဲ့စိတျလေးကို ဆယျကြျောသကျအရှယျထဲကနတေဖွညျးဖွညျးသငျပေးပါ။ တဈဘ၀လုံးအတှကျ စိတျခမျြးသာဖို့အကောငျးမွငျတတျတဲ့စိတျလေးလညျးရှိဖို့လိုပါတယျ။ 3. တငျးတိမျရောငျ့ရဲတတျအောငျသငျပေးပါ ဒီအရှယျမှာ အရှိသငျ့ဆုံးကတော့တငျးတိမျရောငျ့ရဲနိုငျတဲ့ စိတျထားလေးပါပဲ…ဆိုလိုခငျြတာက တဈခြို့သော ဆယျကြျောသကျလေးတှဟော ဒီလိုမနူးမနပျအရှယျမှာ စိတျထှပွေီး အရမျးကိုသူမြားထကျသာခငျြတာမြိုး၊ လောဘကွီးတာမြိုးတှဖွေဈလာတတျပါတယျ။ … Read more
အောက်ဆီဂျင်လေး (၁) လုံးလောက် အကူညီတောင်းပြီးနောက် (၇) နာရီအကြာမှာ “မလိုအပ်တော့ပါဘူး”လို့ ပို့စ်လေးပြန်တင်ခဲ့တဲ့ ရင်နာစရာဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု
လတ်တလောမှာ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့် စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတွေအပြင် တစ်ကျော့ပြန်ကူးစက်လာတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် လူအများအပြား သေဆုံးနေရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကိုလည်း နေ့ရောညပါ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နေအိမ်တွေမှာ ကုသနေကြတဲ့ ကိုဗစ်လူနာတွေများလာတာနဲ့အမျှ အောက်ဆီဂျင်များ အလွယ်တကူမရှိတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ဒီလို အောက်ဆီဂျင်များအလွယ်တကူ အရေးပေါ်မရရှိတာကြောင့် ချစ်ရသူတွေကို မျက်စိအောက်မှာပဲ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ယခုမှာလည်း အောက်ဆီဂျင်အလွယ်တကူမရတဲ့ ပြဿနာကြောင့် စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်လေးကတော့ အရေးပေါ်အသက်ရှုဖို့လိုအပ်နေတဲ့ မိခင်အတွက် အောက်ဆီဂျင်လေး (၁) လုံးလောက် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ကူညီကြဖို့အသနားခံတဲ့ ပို့စ်တင်ပြီးနောက် (၇)နာရီအကြာလောက်မှာပဲ မိခင်ဖြစ်သူဟာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ရပါတယ်။ အသက်ရှူဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ မိခင်အတွက် အကူညီတောင်းနေရှာလာတဲ့ ပို့စ်လေးက နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲ “မလိုတော့ပါဘူး”ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေကြောင့် မြင်ရသူအဖို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပိုပြီးရင်နာစရာကောင်းတာကတော့ … Read more
ရုတ်တရက် ချွဲကျပ်ပြီး အသက်ရှူမဝ ဖြစ်လာပါလျှင်
၁ – ပရုပ်ဆီ သို့မဟုတ် ဒါဏ်ကြေလိမ်းဆေး တမျိုးမျိုးကို လက်ညိူး တကော်စာယူပြီး ခွက်တစ်လုံးတွင်ထည့်ကာ ရေနွေးပူပူလောင်းထည့် ဆေးပျော်သွားအောင် မွှေပေးပါ။ ၂ – မတ်ခွက်ကိုလက်ဖဝါးနဲ့အုပ်ပါ ခွက်အတွင်းမှာ ထွက်လာသည့်ဆေးငွေ့ကို နှာခေါင်းနဲအဆုပ်အတွင်းသို့ရောက်အောင် ဖြေးညင်းစွာရှူသွင်းပါ။ ၃ – ဦးခေါင်းကိုအပေါ်မော့ပြီး ပါးစပ်မှ ရှူသွင်းထားသည့်လေကို ပြန်ထုတ်ပါ ။ (ရေနွေးခွက်ရှိရာသို ပြန်ထုတ်သည့် လေကိုမဝင်ပါစေနဲရှူသွင်း ပြန်ထုတ် ၁၀ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းဖြင့် နှာခေါင်းနဲ့လည်ချောင်းအတွင်း အပူရှိန်ရှိနေသည်။ ၄ – ကျန်ရှိနေသည့် အပူငွေ့ကို ( ခွက်ထဲမှနွေးငွေ့ပြန်ရှူ ထုတ်မသုံး )ရှူလိုက် ၊ထုတ်လိုက် ၊၁၀ ကြိမ် ထပ်မံပြုလုပ်ပေးပါ။ထိုသို့လုပ်နေစဉ် ချွဲများပျော်ကျလာမည် ၁ ၀ ကြိမ်ပြည့်အောင် ဆက်လုပ်ပေးပါ ။ သတိပြုရန် – … Read more
အံ့သွစရာ ကောငျးလောကျအောငျ ခြိုငျးကွားက အသားအရကေို ဖွူဝငျးလာစမေယျ့ သဘာဝနညျးလမျး (၅) မြိုး…
သြစရာ ကောင်းလောက်အောင် ချိုင်းကြားက အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း (၅) မျိုး ချိုင်းကြားအသားအရေ မည်းနေတာကြောင့် လက်ပြတ်၊ချိုင်းပြတ်၊ဝတ်ဖို့ အခက်ေ တွ့တာ၊ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရေမကူးနိုင်တဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် နည်းလမ်းကော င်းတွေကို အကြံပြုပေးချင်ပါတယ်။ အသုံးပြုရမယ့် ပစ္စည်းတွေကလည်း နေအိမ်မှာ အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ။ ချိုင်းကြားအသားအရေ ဟာ နေရောင်နဲ့ လုံးဝမထိတွေ့ရတာကြောင့် အဲ့ဒီနေရာမှာ ဆဲလ်သေတွေစုပုံလာပြီး ချိုင်းကြား အသားအရေ မည်းညစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေထဲက စိတ်ကြိုက် နည်းလမ်းတစ်ချို့ ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုပေးပါက ညိုမည်းနေတဲ့ ချိုင်းကြား အသား အရေကို သိသိသာသာဖြူဝင်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁)သံပရို သံပရိုရည်ဟာ ဗက်တီးရီးယားတွေကို နှိမ်နင်းပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေး တစ်မျိုြး ဖစ်သလို ညိုမည်းနေတဲ့ နေရာတွေကို အရောင်ချွတ်ပေးနိုင်တဲ့ အရောင်ချွတ်ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ သံပရိုကို … Read more
ဒီခြိနျမှာ မိသားစုတိုငျး သံပုရာသီး( ၉ ) လုံးကိုယခုကဲ့သို့ပွုလုပျပွီး ဆောငျဖွဈအောငျဆောငျထားပေးကွပါ(အကာအကှယျတဈခုဖွဈစပေါတယျ)
ဒီကွားထဲမိသားစုအားလုးံ သံပုရာသီးတလုးံစီဆောငျထားကွနျော စီရငျမညျ့သူ မှေးနမေ့ရောကျခငျ တဈရကျကွို ပွီး သံပုရာသီးကို ဈေးကနေ ၉ လုံးဝယျလာပါ ပွီးရသေခြောဆေး မှေးနမေ့တိုငျခငျ ည (မိမိမှေးနကေ့ တနဂျနှဆေို စနေည 9:45 )မှာဘုရားကပျ ဘုရားကို သရဏဂုံ ၉ခေါကျ သံဗုဒ်ေဓ ကိုးခေါကျ ဘုရားဂုဏျတျော ကိုးခေါကျဆီ ရှတျ နောကျနမှေ့ေးနမေ့နကျ ၉း၄၅ မှာလညျး တဈခါ အပျေါကအတိုငျး ၉ခေါကျဆီရှတျ ပွီး သံ အသဈ တဈခြောငျး နဲ့ သံပရာသီး အားလုးံကို အရဟံလို့လိုကျရေးပါ ပွီးရငျအိမျရှိလူကုနျ အားလုးံဆောငျထားကွပါ စီရငျမညျ့သူ သီလ ကွီးရငျ ကွီးသလိုအစှမျးထကျမွကျသော အစီအရငျဖွဈပါတယျ. . တဈယောကျတဈလုးံဆီ ဆောငျထားကွ ပိုတဲ့ အလုးံတှေ ကိုဘုရားဆပျပွီးကပျထားကွပါ။ သံပုရာတဈလုးံရဲ့အား က … Read more